မြန်မာ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို ICC တင်ဖို့ ဘင်္ဂလားဒေ...
28 ส.ค. 2561 - 22:43 น.
မြန်မာ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှု ကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ အချက်အလက် ရှာဖွေရေး မစ်ရှင်အဖွဲ့ စွပ်စွဲ
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်အပါအဝင် ထိပ်တန်း မြန်မာ တပ်မတော် ခေါင်းဆောင် ၆ဦးကို ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှု၊ ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်တွေမှာ လူအမြောက်အများ အပေါ် ရက်စက်စွာ ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇဝတ်မှု၊ စစ်ရာဇဝတ်မှု စတာတွေအတွက် ICC နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မှု ခုံရုံးမှာ စစ်ဆေးသင့်တယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ အချက်အလက် ရှာဖွေရေး ကော်မရှင်အဖွဲ့က အစီရင်ခံ စာ ထုတ်ပြန် တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
၂၀၁၇ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၅ရကနေ့က ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရှိတဲ့ ရဲကင်းစခန်း ၃၀လောက်ကို အာဆာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က စီးနင်း တိုက်ခိုက်ခဲ့အပြီး တပ်မတော်က နယ်မြေ ရှင်းလင်း စစ်ဆင်ရေးတွေ လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် ရိုဟင်ဂျာ ၇သိန်းလောက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံဘက်ခြမ်းကို ထွက်ပြေး ခိုလှုံခဲ့ကြတာပါ။
ရိုဟင်ဂျာအရေး ဇူလိုင်မှာ ဖြေရှင်းဖို့ ICC ရက်သတ်မှတ်
ICC ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မြန်မာက ထည့်မစဉ်းစား
ICC အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတခု ဖြစ်တဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ မြန်မာ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို ICC တင်ဖို့ ကိစ္စကို ဘယ်လို သဘောထား ရှိသလဲလို့ ဘီဘီစီ ဘင်္ဂါလီ ဌာနမှူး ဆာဘီယာ မွတ်ဆတာဖာ ကို မေးကြည့်ရာမှာ
ဆဘီယာ မွတ်ဆတာဖာ။ ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရဘက်က တရားဝင် ထုတ်ပြန်တာမျိုး မရှိသေးပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ရိုဟင်ဂျာတွေ အလုံးလိုက် အရင်းလိုက် ဝင်လာတာကြောင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအပေါ် ဘယ်လို ရိုက်ခတ်မှုတွေ ဖြစ်ခဲ့သလဲ ဆိုတာကို ပြီးခဲ့တဲ့ လအနည်းငယ်တုန်းက ICC က ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရကို မေးခဲ့တုန်းကတော့ ပြန်တုံ့ပြန်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လို တုံ့ပြန်ခဲ့သလဲ ဆိုတာ ICC ကရော ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကပါ ထုတ်ပြောတာမျိုး မရှိပဲ လျှို့ဝှက်ထားပါတယ်။ သိရသလောက်တော့ မြန်မာ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို ICC တင်ဖို့ ကိစ္စမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်က ပါဝင် ပတ်သက်ချင်တဲ့ ပုံ မတွေ့ရပါဘူး။
ဘီဘီစီ။ ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရက ဘာ့ကြောင့် ဒီကိစ္စမှာ မပါချင်တာလဲ။
ဆဘီယာ မွတ်ဆတာဖာ။ ။ရိုဟင်ဂျာတွေ မြန်မာပြည် ပြန်ပို့ရေး လုပ်ငန်းစဉ်မှာ မြန်မာ အစိုးရက အချိန်ဆွဲ လုပ်နေတယ် ဆိုပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်က သိပ်သဘောမကျပေမယ့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရဟာ မြန်မာ အစိုးရနဲ့ ဆက်ဆံရေး ကောင်းချင်တယ် ဒါ့ကြောင့် ကနဦးမှာ နှစ်နိုင်ငံ နားလည်မှု စာချွန်လွှာကို နေပြည်တော်မှာ လက်မှတ်ထိုးခဲ့တယ်။ မြန်မာအစိုးရဘက်ကလည်း ဒက္ကာမြို့ကိုလာပြီး နောက်ထပ် သဘောတူချက်တွေ လက်မှတ်ထိုးခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် လုပ်ငန်းစဉ်က သိပ်ကို နှေးကွေးနေပြီး ခုချိန်ထိ ရိုဟင်ဂျာ တယောက်မှ ရခိုင်ဒေသကို ပြန်သွားတာ မရှိသေးပါဘူး။ ဒီတော့ကာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရက သံတမန်နည်းအရ ကြိုးပမ်းနေတယ် ဒါပေမယ့် မြန်မာဘက်က လုံလောက်တဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု မရှိသေးဘူးလို့ မြင်ပါတယ်။
ဘီဘီစီ။ ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဟာ ICC အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်နေတဲ့အတွက် မြန်မာ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို ICC တင်နိုင်ဖို့ အကြောင်းရင်း သူတို့မှာ ရှိနေတယ်၊ ဘာ့ကြောင့် မလုပ်တာလဲ။
ဆဘီယာ မွတ်ဆတာဖာ။ ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် လူထု သဘောထား တွေကို ကြည့်မယ် ဆိုရင် အများစုက မြန်မာ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို ICC တင်ချင်တယ်။ လူသားချင်း စာနာတဲ့ ကယ်ဆယ်ရေး ပြဿနာကြီးတွေ ဖြစ်လာရတဲ့အပေါ် NGO အဖွဲ့အတော်များများတွင်းမှာလည်း အလားတူ သဘောထားမျိုး ရှိနေတယ်။ ဒီတော့ ဥပဒေပညာရှင်တွေ၊ NGO တွေ၊ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူတွေကတော့ မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို ICC တင်သင့်တယ်လို့ ယူဆနေကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရဘက်က မြန်မာ အစိုးရနဲ့ ဆက်ဆံရေး ဆိုးဝါးသွားမှာကို မလိုလားဘူး။ ဒါ့အပြင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဟာ အိန္ဒိယ၊ တရုတ်၊ ရုရှား စတဲ့ နိုင်ငံတွေနဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ ဆက်ဆံရေး ထားရှိတယ်။ ဒီနိုင်ငံ ၃ခုစလုံးဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ICC မတင်ချင်ဘူး၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ မြန်မာ အကြား ဆက်ဆံရေး ကောင်းစေချင်တယ်။ဒါ့ကြောင့် တရုတ်၊ အိန္ဒိယ တို့ရဲ့ အကြံပြုချက်အတိုင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်က မြန်မာနဲ့ သံတမန်နည်းအတိုင်း သွားနေတာ ဖြစ်တယ်။ တဖက်မှာလည်း နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်း အထူးသဖြင့် ကုသမဂ္ဂက မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို ICC တင်ချင်နေတာ ဆိုတော့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ လာမယ့် ရက်ပိုင်း လပိုင်းမှာ ဖိအားတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရဖို့ ရှိပါတယ်။ ဘယ်လို တုံ့ပြန်မလဲ ဆိုတာတော့ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။
อัลบั้มภาพ မြန်မာ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို ICC တင်ဖို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဆန္ဒရှိသလား